‘नेपाल आउँदा उत्साहित छु’ – भलिबल प्रशिक्षक एबिङ | Hamro Khelkud
नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीको नवनियुक्त प्रशिक्षक हान एबीङ नेपाल आइपुगेका छन् । नेपाल भलिबल संघको पहलमा नेदरल्यान्ड्स भलिबल संघको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ (एफआइभीभी) ले नेपालका लागि नेदरल्यान्ड्सका एबिङलाई मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा नेपाल पठाएको हो ।
उनको सम्झौता ३ महिनाको रहेको छ । उनले मासिक झन्डै ५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक रहेको छ । उनी नेपाल रहँदाको तलब एफआइबीभीले बेहोर्नेछ । उनले नेपालमै साउन अन्तिम साता आयोजना हुने एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपसम्म नेपालको टोलीलाई सम्हाल्नेछन् ।
नेपाल आएपछि हाम्रो खेलकुदले हानसँग लिएको अन्तर्वार्ता :
नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ, नेपाल आउँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
सुरुवातमै तपाईं पत्रकार र संघका पदाधिकारीबाट एकदम राम्रो स्वागत पाएँ । आशा छ यो अन्तिम हुने छैन । म यहाँ सेन्ट्रल जोन भलिबलसम्म झन्डै १०-११ साता बस्नेछु । यो समय फलदायी हुनेमा आशावादी छु । मसँगै तपाईं पत्रकारहरुको समय पनि राम्रो नै होला, हामी प्रशिक्षक, संघ र समग्र खेललाई अगाडी लग्न नै संचारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अब टोलीलाई भेट्न निकै उत्साहित छु । मैले केहि खेलाडीलाई युट्युबमा पनि हेरें । नेपाललाई प्रशिक्षण दिइसकेका डच प्रशिक्षक म्याट र लेस्लीसँग पनि केहि छलफल गरेको छु । अब आफैं टोलीलाई हेर्न चाहन्छु ।
नेपाली भलिबलबारे केहि थाहा छ ?
लेस्ली र म्याटसंगै डच भलिबल संघका पिटरले पनि नेपाली भलिबलबारे जानकारी दिएका छन् । एसियाडको केहि खेल पनि हेरें । मैले नेपाल भलिबलबारे थाहा नभएको धेरै कुरा जान्न बाँकि नै छ ।
विश्व भलिबलमा २५ वर्षको अनुभव रहेको छ । नेपाली टोलीमा के हेर्नुहुन्छ, नतिजा कि प्रदर्शन ?
सबैभन्दा पहिला त खेलाडीहरु हेर्न बाँकी छ । उनीहरुले अहिले कस्तो प्रशिक्षण गरेका छन् त्यो बुझ्नुछ । त्यसपछि मात्र मैले यसको उत्तर दिन सक्षम हुनेछु ।
सेन्ट्रल जोन भलिबलको विपक्षी टोलीबारे केहि थाहा छ ?
मैले भर्खर प्रशिक्षकसँग पनि यहि कुरा गरिरहेको थिएँ । मैले बंगलादेश, तुर्कमेनिस्तान जस्ता राष्ट्रबारे वहाँसँग जानकारी लिनेछु । यी देश नेदरल्यान्ड्ससंग नजिक छैनन् त्यसैले खासै जानकारी छैन । आशा छ हामीले राम्रो तयारी गरेर उनीहरु यहाँ आएपछि अझ बुझ्नेछौं ।
नेपाल रोज्नुको कारण के हो ?
मैले नेपालको प्रशिक्षण सम्हालिसकेका म्याट र लेस्लीसंग छलफल गरें । पीटरले पनि प्रस्ताव राखेपछि यहाँ आउने निर्णय गरें । नेपाल भलिबल मन पराउने देश हो । नेपाल हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि प्रख्यात छ र यहाँको वातावरण पनि राम्रो छ । यो सबै अनुभूति गर्न पनि चाहना हो ।
प्रशिक्षणमा २५ वर्ष लामो प्रशिक्षण अनुभव बटुलिसकेको ५८ वर्षीय हान ७ वर्षभन्दा १९९७ देखि २००४ सम्म डच भलिबल टिमको प्रशिक्षक रहेका थिए । २००४ देखि २००८ सम्म जर्मन महिला भलिबलको मुख्य प्रशिक्षक रहेका उनले २००८ मा जर्मन कपको उपाधि दिलाएका थिए ।
सन् २००८ देखि २०१३ सम्म जर्मनको महिला यू–२० टिमको प्रशिक्षक रहेका उनी २०१४ देखि २०१५ सम्म नेदरल्याण्डसको यू–२१ टिमको मुख्य प्रशिक्षक रहेका थिए । २०१५ देखि २०१६ सम्म एक बर्ष स्विट्जरल्याण्ड भलिबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए । त्यसपछि उनी २०१६ देखि २०१८ सम्म सुल भलिबलको प्रशिक्षक रहेका थिए ।
नेपाल भलिबल संघले सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप र आसन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को लागि पुरुष र महिलामा समान २५–२५ खेलाडीको प्रारम्भिक टोली सम्मिलित छनोट गरिसकेको छ । हानले आजैदेखि प्रशिक्षण थाल्नेछन् ।